BBC-du Miyey ka Masuugtay Warbixintii Xoriyatul Qawlka Ee Freedom House ka Sheegtay Somaliland?…Faallo | Kaafi News
BBC-du Miyey ka Masuugtay Warbixintii Xoriyatul Qawlka Ee Freedom House ka Sheegtay Somaliland?…Faallo
February 13, 2019 - Written by admin
Hargeysa(kaafinews):-Laanta Af Soomaaliga ee BBC-du waxay la qabsatay inay ula-kac u xajiimayso Jamhuuriyadda Somaliland, si ay u marin habaabiyaan bulshada, iyadoo caaddeysatay in aanay dheeli-tirin barnaamijyada iyo faallooyinka ay ku durayaan Jamhuuriyadda Somaliland.
Idaacaddan oo indhawaale ay la wareegeen hawlwadeenno qaarkood ku kaddeedan afka war-tabinta, isla markaana lagu gardaadiyey xiqdiga ay u hayaan Qaranimada Somaliland, waxay is-qaadsiiyeen dagaalka ay ku xaqirayaan Somaliland oo ah dal nabdoon oo ay ka jirto dawlad dimuqraadi ah oo xornimo u hadalka iyo madax-bannaanida Saxaafaddu u tahay tiirarka waaweyn ee halbeegga u ah dawladnimadeeda.
Laanta Afsoomaaliga ee BBC-da waxay 12kii bishan ku daabaceen mareegtooda faallo ciwaankeedu ahaa; “Somaliland: Ma tiirkii asaasiga u ahaa Dimuqraaddiyadda ayaa Halis ku Jira?”
style=”font-size:16px;”>Waxa wax ka soo qaad mudan in aanay BBC-du waxba weydiinin masuuliyiinta Xukuumadda ee wadar ahaan la eedeynayey, waxaanay Xoriyatul-qowlka Somaliland ay ku miisaameen hal xukun oo Maxkamadda Gobolka Maroodi-jeex ay ku riday horaantii toddobaadkan Wargeyska FOORE ee ka soo baxa Caasimadda Hargeysa, kaasi oo maxkamaddu caddeysay inay ku heshay dambi la xidhiidha inuu daabacay warar been abuur ah oo wax loogu dhimay cirdiga iyo sharafta Musheekh iyo Masuuliyiin dawladeed, iyadoo uu walina ay u furan tahay masuuliyiinta Wargeyskaas inay racfaan ka qaataan xukunkii ku dhacay haddii ay dood sharci ah ka qabaan.
Waxaa isweydiin mudan dacwadda Wargeyska FOORE iyo xadhiga Abwaan Cabdiraxmaan Abees oo isna ku eedaysan inuu sumcad dilayey ciidanka Booliska, ma loo nisbeyn karaa in la yidhaahdo “Waxa halis ku jira Tiir Aasaasiga u ah Dimuqraaddiyadda?.”
Jawaabta, waxaan u dhaafaynaa inay ka garsooraan bulshada Xog-ogaalka ah ee caqligooda malo-awaalka lagu jiheynayo. waxayse Faallada BBC-du muujinayaa inay idaacadaasi ay ku shaqeyso Siyaasad dhexdhexaadnimada ka fog oo ay u adeegsato inay ku Nashuushadeeyaan Jamhuuriyadda Somaliland.
Yoolka BBC-du ka laheyd faalladaas, ayaa u muuqata inay kaga masuugayeen Warbixin isla toddobaadkan soo baxday oo ay soo saartay Hay’adda Freedom House oo fadhigeedu yahay Washington oo qirtay in Somaliland ay xorriyadda hadalka kaga horreyso, isla markaana kaga wanaagsan tahay Dhammaan dalalka Gobolka Geeska Afrika, taasi Soomaaliya oo BBC-du u xagliso ku qiimeysay dalalka safka hore kaga jira dhibaataynta iyo dilalka Suxufiyiinta.
Madax-bannaanida Saxaafadda iyo Xornimo u hadalku waa waajib uu dastuurku u damaanad qaaday muwaadiniinta JSL, Sidoo kalena xoriyatul-qowlku waa mid si dabiici ah lafta iyo dhiigga kaga jira ummadda reer Somaliland oo ah aan la suullin karin.
Xukuumadda Somalilandna waa mid u heellan inay koriso oo si anshax leh ay u kaalin-geliso Saxaafadda Somaliland oo tan iyo dib ula soo noqoshada madax-bannaanida dalkan ka soo ciyaartay door lama ilaawaan ah, isla markaana kaalin togan ka soo qaatay marxaladihii kala duwanaa JSL soo martay Soddon sanno ku dhowaadkii la soo dhaafay.
Xigasho: Wakaallada WARARKA SOMALILAND (SOLNA)